Ogaden News Agency (ONA) – Talooyinka la siiyay Itobiya waxaa ka mid ahaa inay abuurto dacaayad caalamka laga iibiyo – waxaase fashiliyay Jeffery Gentleman, Johan Persson iyo Martin Schibbye
Talooyinka la siiyay Itobiya waxaa ka mid ahaa inay abuurto dacaayad caalamka laga iibiyo – waxaase fashiliyay Jeffery Gentleman, Johan Persson iyo Martin Schibbye
Posted by ONA Admin	/ September 18, 2013
Itobiya inay dacaayad ay miciin biday ma’aha wax ka qarsoon qofkii caqli leh, waxaana daliil cad u ah siday u buunbuuniso arima la ogsoonyahay in aanay waxba ka jirin. Somalida horey ugu maahmaahday – Hadaad been sheegi mid run u eg sheeg -. Taasoy ula jeedaan saad ugu caana maasho in mudda ah kollayba waa la ogaani beentaadee.
Waxaan warbixintii hordhaca ahayd ku sheegnay in Itobiya Hawgalkii Cobolle ka dib ay la kaashatay kubaro iyo shirkado caalami ah oo kala taliya siday isaga cabin lahayd halganka jabhadda ONLF. Ka dibna in lagula taliyay arima badan oy ka mid ahayd;
Qodobka 2aad waxaan u soo hormarinay inuu ahaa talaabadii ugu horeysay ee kali ahaan ay Itobiya u qaaday kahor intaanay la kaashanin dhibaatada haysata shirkadaha iyo aqoonyahano ku xeeldheer arimaha brobagaandada. Ciidanka Itobiya oo u arkay hawlgalkii Cobollo inuu sumcad dil ku ahaa ayaa go’ansaday inuu guluf dagdag ah qaado oo sumacda uu caalamka ku lahaa u soo celisa. Wuxuu ku dhawaaqay ciidanka Itobiya ENDF inuu kaga sifeynayo CWXO gabi ahaan Ogadenya dhowr bilood. Waxaa ka soo wareegatay 6sano, inkastoo caalamka gaar ahaan reer Galbeedka uu K/Talihii bakhtiyay Meles Zenawi ka codsaday in aan lagala hadlin mudadaa dhibaatada soo gaadha dadweynaha rayadka ah, siduu hadalka u dhigay.
Natiijadii maxay noqotay? Sanad ka dib, siday ballantu ahayd ilaa waqtigan xaadirka ah, Itobiya waxay awoodi kari weyday siday kula balantay dawladaha caalamka inay u ogolaato saxaafadda caalamka socdaal madaxbanaan inay ku maraan dalka say indhahooda ugu arkaan inlaga sifeeyay ONLF gudaha Ogadenya iyo guulaha uu gaadhay ciidanka ENDF. Iskadaa inay Itobiya u ogolaatee, saxifiyiintii iskood u galay dalka say u soo arkaan sheekashada labada garab ee ONLF iyo Itobiya midkoodii runta u dhow, Itobiya waxay dhigtay xabsi iyo Jidhdil.
Waqtiyar ka dib Hawlgalkii Cobolle waxaa galay Ogadenya saxafiga caanka ah ee NYT Jeffrey Gentleman oo maalmo la socday CWXO. Markuu ka soo tagay N/hurayaashii oo magaalada Dhagaxbuur uu yimid waxaa ka warhelay ciidankii Itobiya ee joogay magaalada. Isla markiiba way qabteen, wuxuu soo duubayna way kala hadheen, maalmo ayayna xabsiga ku hayeen iyagoo ula dhaqmay si aadminimada ka baxsan isaga iyo xaaskiisii oo sawir qaadihiisa ahayd. Markii la weydiiyay Jeffrey arintii ka qabsatay Ogadenya wuxuu sheegay inuu ka cabsanayay ciidanka ONLF, maadaama muddo yar ay ka soo wareegatay hawgalkii Cobolle, hasa ahaatee aanu marnaba isodhan ciidanka Itobiya ayaa ku xidhi doono oo siyaabihii foosha xumaa kuula dhaqmi doona;
(GREG WINTER. Now, clearly the Ethiopians are not eager for this story to get out since you, along with a Times photographer and your wife, who is a videographer, were all imprisoned for nearly a week after reporting in the Ogaden. Tell us what happened. What did they do to you and why did they pick you up?
JEFFREY GETTLEMAN. Well, we were blindsided by this. We had thought that the main danger to us — the biggest danger to us — was the rebel forces because this had been a group that had recently launched an attack on a Chinese oilfield and had killed some Chinese workers. So we thought, going into this area, that if there was any risk, it was from the rebel side. However, the Ethiopian government is very sensitive about the Ogaden region. It seems to be one of the biggest threats to the stability of the country. (Halkan ka akhri)
Wuxuu Jeffrey Gentleman (NYT) markii ugu horeysayna caalamka u soo bandhigay inay Itobiya ku qasabtay dadkii rayadka ahaa iyo shaqaalihii madaniga ahaa inay galaan dagaalka. Waxaa ka mid ahaa dadka uu wareystay nin uu ku sheegay macallin quraan inuu ahaa oo lagu magacaabo Cali Maxamuud. Wuxuu sheegay Cali in laga soo kaxeeyay fasalka dhexdiisa oo lagu soo daray maleesiyada. Wuxuu yidhi; ” N/hurayasha ma aragtid meesha ay kaa soo tooganayaan, hadaad damacdo inaad carartana waxaa ku dilaya ciidanka Itobiya.” .. “It’s terrifying,” said Ali Mahamoud, a Koranic teacher who said he was yanked out of Arabic class a few months ago and was assigned to a militia. “You can’t see the rebels when they’re shooting at you. And the Ethiopians will kill you if you try to run.” (Halkan ka akhri)
Waqtiga uu Jeffery galay dalka waxay ahayd 2007dii. Maxaa iska badalay ilaa hadda? Maloo ogolaaday saxaafadda caalamka siday filayeen inay galaan Ogadenya oy indhahooda ku soo arkaan xaaladda meesha ay mareyso? Sow ma ahayn 2011 markii ay Itobiya ku maxkamadeysay labadii Wariye eeSwedeninay soo galeen dalka oy la socdeen ciidan ONLF ah? Fiiri halkan;
Su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay, yaa qariya xaaladda dhabta ahee uu ku sugan yahay? Ma ciidan adkaaday mise ciidan laga adkaaday? Ma qof dambiile ah mise qof aan dambiile ahayn?
Itobiya haddii ay ka adkaatay ciidanka ONLF siday shaaganayso oo dalka Ogadenya ay ka sifaysay, oo dalka nabad yahay oo horumar uu ka socdo – Fiiri hadalkii RW Itobiya- (ETHIOPIAN SOMALIS BENEFITING FROM DEV’T: PM HAILEMARIAM), sow ma ahayn inay u ogolaato saxaafadda caalamka inay dalka siday doonaan u dhex qaadaan oo indhahoda ku soo arkaan? Mase waa inay tidhaahdo qofna ma dhaafi karo Jigjiga, halkaas ayuu Cabdi iley idiinku warami oo xogta dhabta ah idinku siini?
Su’aalahaa waxaan u daynaynaa akhristaha inuu jawaab waafi ah maskaxdiisa ka helo ama iskii u raadiyo xaqiiqada dhabta ahee ka jirta Ogadenya.
Itobiya markii ay ku guuldareysatay inay ciidan ahaan kaga adkaato ONLF, waxaa lagula taliyay inay adeegsato dacaayad iyo beenabuur, kharash badanna u hurto arintaa hadiiba ay kari weyday inay xaqiiqada soo bandhigto. Waa inoo qaybaha kale.